विद्युत प्राधिकरणका ज्यालादारीलाई मन्त्री पुनको समर्थन, कुलमानको बहिष्कार - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ २६, २०७५ 9883 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा लामो समयदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीले राखेका माग पूरा हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले अग्रसरताले लिएर माग पूरा गर्न लागेका हुन् ।
शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँगको छलफलपछि ज्यालादारी कर्मचारी उत्साहित देखिएका छन् । उनले आइतबार विस्तृत छलफल गरेर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
गत साता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरिक्षणक्रममा मध्य तथा सुदूरपश्चिम पुगेका मन्त्री पुनसँग ज्यालादारी कर्मचारीले दाङमै भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए । उनले शुक्रबार आफू काठमाडौं फर्किने र यसपछि छलफल गरेर माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका थिए ।
शुक्रबार प्राधिकरण सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारीसँगै मन्त्रालय पुगेका ज्यालादारीको माग पूरा गर्न उनीहरूले पनि मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । आइतबार मन्त्रीसँगको छलफलपछि निष्कर्ष निस्किने दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले बताए ।
‘छलफल निकै सकारात्मक भयो, मन्त्रीज्यूले तत्काल पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधन हुने बताउनुभएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अन्य माग छलफल गरेर पूरा गर्दै जाने भन्नुभएको छ ।’ प्राधिकरणले मागबारे बेवास्ता गरेपछि समितिले गत सोमबारदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
मन्त्री पुनसँग दाङमा भएको छलफलपछि सोमबार गर्ने भनेको आन्दोलन रोकिएको थियो । शुक्रबार दिनभरि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कुरेका कर्मचारीले उनलाई भेट्न पाएनन् । घिसिङले ज्यालादारीको माग बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ ।
‘ज्यालादारीका माग प्राधिकरणले त्यहीँबाट समाधान गर्नुपर्छ, मन्त्रीसमक्ष पुग्नुपर्ने समस्या नै होइन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, कार्यकारी निर्देशकले बेवास्ता गरेपछि मन्त्रीज्यूसम्म पुग्नुपर्यो, उहाँले अग्रसरता लिनुभएको छ ।’
ज्यालदारीका समस्या तथा माग पूरा गर्नेबारे प्राधिकरण आधिकारिक टे«ड युनियन तथा अन्य संगठनको पनि पूर्ण समर्थन रहेको यादवले बताए । सरकारले नयाँ श्रम नियमावली समेत जारी गरेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले श्रमिकलाई शोषण गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
नयाँ श्रम नियमावलीले औद्योगिक, व्यवसायिक, निर्माण र घरेलु कामदारलाई पनि समेटेको छ । यस्ता कामदारको मासिक तलब छुट्टै बैंक खाता खोली भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । एउटै संस्था वा कम्पनीले वर्षमा १५ दिनभन्दा बढी काम लगाए पनि यो नियम लागू हुन्छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अब कबोल गरेको वा सम्झौता अनुसार तलब नदिने कम्पनी वा संस्थालाई दबाब दिन पनि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । नियमावली लागू भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने हुँदा कागजमा तलब देखाउन पाइने छैन । यसो गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई सरकारले कारबाही समेत गर्ने चेतावनी दिएको छ ।